एमालेका राजन भट्टराई र प्रदीप ज्ञवालीलाई भारतको आर्शिबाद
काठमाडौं,१५ मंसिर । आफुलाई राष्ट्रबादी भन्दै प्रचार गराएका नेकपा एमालेका केही नेताहरु भारतका लागि सवै भन्दा विश्वास पात्र रहेको खुलासा भएको छ ।
भारतको विरुद्धमा भाषण गर्दै हिड्ने केपी शर्मा ओलीले बाहिर जनतालाई भ्रममा पारेर राष्ट्रबादी देखाउन भारत विरोधी भाषण गरेपनि भित्रभित्र भने भारतका सवै भन्दा बढी सहयोगी भएको आधारहरु भेटिएका हुन् ।
अध्यक्ष हुनु भन्दा अगाडी एमाले भित्रै पनि केपी ओलीको गुट भारतीय खेमाका रुपमा चिनिने गरेको थियो भने एमालेकै अर्को गुठका नेताहरुले ओलीको गुठलाई भारतीय दलालीहरुको गुठ भन्ने गरेको थियो ।
सूचना बेचेर झ्वाम
एमाले नेता माधबकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुदाँ ओलीले भारतलाई सेवा गर्नकै लागि आफ्नो तर्फबाट राजन भट्टराईलाई विदेश मामिला सल्लाहकारमा नियुक्त गर्न बाध्य पारेका थिए ।
आफ्नो मान्छेलाई नियुक्त गराएर ओलीले भारतीयहरुलाई सुखी बनाएका थिए भने नियुक्त भएपछि भट्टराईले भारतका लागि सूचनादूतको रुपमा काम गरेका थिए ।
त्यतीबेला देखि बलियो बनाएको सम्वन्ध ओली र भट्टराईले भारतीय कुटनीतिज्ञहरुसँगकै सल्लाह अनुसार बाहिर भारत विरोधी जस्तो देखिने र भित्र भित्र सवैले भन्दा धेरै सहयोग गर्ने रणनीति अप्नाउदै आएको दूताबासमा धाउनेहरु बताउछन् ।
सल्लाहकार भएकै बेला भट्टराई अध्यक्ष रहेको नेपाल नीति अध्ययन प्रतिष्ठान (निप्स)ले डिएफआईडीमार्फत विदेशी सहयोग लिएर सुरक्षासम्बद्ध नीतिमा चलखेल गरेको समाचार राष्ट्रीय दैनिक पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमै छापिएको थियो ।
आफ्नो नियुक्ती खाएर भारतको सेवा गरेको भन्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेपालले पनि भट्टराईलाई झपारेको र उनीहरुकाबीचमा कटु सम्बन्ध रहेको सार्वजनिक भएको थियो ।
भट्टराई अध्यक्ष रहेको निप्सले २०६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सम्बन्धि परियोजनाका लागि ३ करोड ४२ लाख ६१ हजार नौ सय ५० रुपैयाँ बराबरको सम्झौता गरेको थियो ।
नेपालको सुरक्षा र कुटनीतिक मामिला सम्वन्धी संवेदनशिल सूचनाहरु दिएबापत विभिन्न परियोजना ल्याएर भट्टराईले दर्जनौं कार्यक्रम माफ्त करोडौं कुम्ल्याएको पत्रकार सरोजराज अधिकारीद्धारा लिखित पुस्तकमा उल्लेख छ ।
भारतका लागि प्रदीप र राजनको सिफारिस चल्ने
ओलीले भारतसँगको व्यक्तिगतस्वार्थ सहितको सम्वन्धलाई बलियो बनाई राख्ने जिम्मेबारी भट्टराई सहित अर्का नेता प्रदिप ज्ञवालीलाई पनि दिएका छन् ।
दुई जनालाई बेला बेलामा दुताबासमा गईरहने, भारतीय राजदूतसँग भेटबार्ता गरिरहने, नेपालका सूचनाहरु भारतलाई दिईरहने, भारतीय सहयोग ल्याएर आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई वितरण गर्ने लगायतका जिम्मेबारी ओलीले दिएका छन् ।
भारतीय दूताबासबाट पाईने एम्बुलेन्स, शैक्षिक छात्रबृत्ति आदीका लागि राजन र प्रदीपको सिफारिस चल्ने गरेको एमाले भित्रै व्यापक चर्चा हुने गरेको छ ।
भारतबाट केही काम गर्नु परेमा प्रदीप र राजनलाई सोध्नु पर्ने एमाले भित्र नियम नै बनाइएको छ । उनीहरुले पनि मान्छे हेरेर सिफारिस दिने र नदिने गरेकाले कतिपय कार्यकार्ताहरु आफ्नो सिफारिस नगरिदिएको भन्दै रुष्ट समेत भएका छन् ।
प्रदिप र राजनलाई नै भारतीयको चुनाव खर्च
अहिलेको निर्वाचनमा पनि केही नेताहरुलाई भारतको आर्शिबाद रहेको राम्रैसँग चर्चा चलेको छ । राजपाका अधिकांश नेता र काँग्रेस तथा राप्रपाका केही नेताहरुसंगै एमालेका राजन र प्रदीप सहितका नेताहरुलाई भारतको आर्शिबाद रहेको चर्चा काठमाडौमा व्यापक छ ।
कुटनीतिक मामिला र भारतसँग संवन्धी व्यक्तिका बीचमा कुन कुन नेतालाई भारतको सहयोग र समर्थन छ भन्ने चर्चा गर्दा एमालेका प्रदीप र राजनको नाम अगाडी नै आउने गरेको छ ।
उनीहरुलाई जसरी पनि जितेर आउन भारतीय सुवेच्छुकहरुले निर्देशन दिएका छन् ।
निर्वाचनका लागि भारतीय दूतावास र विभिन्न बैदेशिक स्वार्थ समुहले आर्थिक सहयोग नै उपलब्ध गराएको दुतावास निकटस्थहरुले बताएका छन् । उनीहरुले प्रदीप र राजनले पाएको रकमकै पनि चर्चा गर्नेगरेका छन् ।
राजन र प्रदीपले महिनामा लैनचौरस्थित भारतीय राजदूतावासबाट पनि रकम बुझ्ने गरेको एमालेका नेताहरूकै आरोप छ । भारतीय दूतावास उच्च स्रोतले पनि भट्टराई र ज्ञवाली बेलाबेला दूतावासमा आउने गरेको स्विकारेको छ ।
भारतसँग नियमित र निकटसंवन्ध भएकै कारण ओलीले उनीहरुलाई बेला बेलामा आफ्नो दूतका रुपमा भारत पनि पठाउने गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री भएका बेला नाकाबन्दीका विषयमा कुराकानी गर्न ओलीले विषेश दूतका रुपमा ज्ञवालीलाई भारत पठाएका थिए । संविधानको विषयमा भने ओलीले भट्टराईलाई भारतका लागि एमालेको दूत बनाएका थिए । ज्ञवाली पराजित भएर संसदमा नभएकाले संसदका सूचना आदानप्रदानका लागि पनि एमालेले भट्टराईलाई नै खटाएको थियो ।
भट्टराइले संसद अवधिभरी जनताका कुरा संसदमा उठाउने र विकास निर्माणका लागि पहल गर्ने भन्दा पनि संविधान निर्माणमा भईरहेका आन्तरिक विषयहरुलाई दूतावासमा पुर्याउने काम गरेका थिए ।
आन्दोलनका बेला भारतबाटै जासुसी
मुलुकमा गणतन्त्रका लागि जनआन्दोलन भईरहेका बेला उनी एक दिन पनि आन्दोलनमा नदेखिएर दिल्लीका रेष्टुरेन्टहरुबाट भारतीयहरुलाई जासुसी गर्दै थिए ।
तत्कालिन जनआन्दोलनबाट गणतन्त्र आउने विश्वास नगर्ने केपी ओलीका चेला राजनले पनि भारतीयहरुलाई गणतन्त्र नआउने विश्लेषण सुनाउने गरेका थिए ।
उनको विश्लेषण नमिलेपछि भारतीयहरुले उनको विश्लेषण क्षमता कमजोर रहेको भन्दै उनलाई सूचनादाताको रुपमा मात्रै उपयोग गर्ने गरेको छ ।
नेपालका सूचना भारतीयहरुलाई दिएबापत भट्टराईले त्यतीबेला भारतीय सरकारको सहयोगमा भारतको जबाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयु)मा पढेका हुन् ।
जेएनयुमा उनले भारतीय कुटनीतिज्ञहरु एस.डी. मुनी र महेन्द्र पी. लाम्पाको विद्यार्थी भएर अध्ययन गरेका हुन् ।
नेपाल–भारत बौद्धिक समूहमा नेपालका तर्फबाट सदस्य समेत रहेका भट्टराई समितिमा भारतका तर्फबाट सदस्य रहेका आफ्ना गुरु महेन्द्रले जे भन्यो त्यही मान्ने नेपाली पात्र हुन्। उनले भारतको चाहनाका बारेमा बैठक अगाडी आफ्ना गुरु महेन्द्रसँग बुझ्ने र त्यही अनुसार बैठकमा भारतीय पक्षलाई सहयोग गर्ने गरेका छन् ।
बैठकमा समितिका सदस्य तथा भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोशिहारीसँग त उनले कहिल्यै पनि विपरित कुरा गर्न नसकेको चर्चा कुटनीतिक बृत्तमा खुवै हुने गरेको छ ।
आफ्ना गुरुद्धय मुनी र लाम्पाको जुनसुकै प्रस्तावलाई अस्विकार गर्न नसक्ने भएकाले भट्टराईको उपस्थीति समितिमा नाम मात्रको भएको एक सदस्यले बताएका छन् ।
०६२–६३ को आन्दोलनताका काठमाडौंबाट भागेर नयाँदिल्ली पुगेका एमालेका नेता भट्टराईलाई कांग्रेसका नेता अमरेशकुमार सिंहले भारतीय सहयोग जुटाएर भर्ना गरिदिएको सिंहले नै बताउने गरेका छन् ।
एमाले र माकेबीच धोकै धोका, ओली भारतभक्त बन्दै !